နောင်လာမဲ့ အနှစ် နှစ်ဆယ် | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ကျွန်တော်တော့ Option 1 ကိုဘဲ မျှော်လင့်နေပါ့မယ်ခင်ဗျ။
ရေးပေးတာ ကျေးဇူး ဒီဘက်လှည့်လာရင် ၀က်သားပေါင်းရယ် ၀က်ခြေထောက်ရယ် ၀က်သားလုံးကြော်ရယ် ၀က်သားနှပ်ရယ် ၀က်...၀က်တွေ ၀ယ်ကျွေးမယ် တကယ်။ အမြည်း - အရှေ့ဖက်ကမ်းခြေက ၀က်ခြေထောက် လွှတ်မိုက်တာဗျ။
သတိပေးချက်-အမကေလို တိတ်တိတ်ပြန်သွားရင်တော့ ရွာသားအပြစ်မပါဘူးနော်
သတင်းစာတစ်စောင် တစ်ကျပ်တဲ့ ရွာသားနေ့တိုင်းဝယ်ဖတ်မှာနဲ့တော့ အတော်ပဲ။
စာအရေးကောင်းတယ်တဲ့ ကြည့်လည်းလုပ်ပါ အရမ်း(ဘာမှန်းမသိပဲ စွတ်ရွတ်ပြီးလေ) ရေးနေတာပါဗျ
မူရင်းက အနှစ်သုံးဆယ်ခင်ဗျ။ ကျနော်တောင် ရှိနေဦးမှာ မသေချာလို့ ဈေးဆစ်ထားတာ နှစ်ဆယ်ထားလို့။ တော်သေးတယ် အခုအချိန်ထိတော့ မောင်ရိုး ဈေးဆစ်သလို မလုပ်မိသေးလို့။
နှစ်ဆယ် (၁)ကို မျှော်လင့်နေပေမယ့် နှစ်ဆယ် (၂)အတိုင်းတော့ ဖြစ်နေတာပဲလေ...
ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်းဝေးဆိုသလိုများ ဖြစ်နေပြီလားမသိပါဘူးနော်...
နောင်လာမယ့် အနှစ် နှစ်ဆယ် (၁) ကိုပဲ ကျွန်တော်လဲ မျှော်လင့်နေပါတယ်ဗျာ....
နံပါတ် ၂ ဖြစ်မှာကိုတကယ်ပဲ တွေးကြောက်မိတယ် ..း(
ချိုသင်းရေ.. လမ်းဆုံရောက်နေပြီပေါ့.. နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ်အတွက် ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ လမ်း ကိုယ်ရွေးကြစတမ်းပေါ့လေ..။ အပိုင်း တစ်မှာ်ဆုံကြတာပေါ့ ချိုသင်းရေ..။ သံသယကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်ခြင်းအပြည့် တည်ဆောက်ထားတဲ့ တိုင်းပြည်လေးမှာ...။
ဒုတိယ အတွေးတော့ totally ကန့်ကွက်တယ်ကွာ
နောင် အနှစ် ၂၀ ကို ပြုံးပြုံးလေးနေပြီ ကြည့်နေလိုက်ပါတယ်...
နှောင်လာမဲ့ အနှစ် (၂၀)
နံပါတ်၁ကို ဖတ်ပြီး ပြုံးနေမိရာက နံပါတ်၂ကို ဖတ်ပြီး ငိုင်တွေမိတယ် မချိုသင်းရယ်...
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လာတယ်။ Option 1 ကို ကျွန်တော်တို့ လုပ်ယူလို့ ရနိုင်တာဘဲနော်။ လူညီဖို့ဘဲလိုတာ။
အပိုင်း၂ လိုကတော့ အခုလည်း အဲဒီလောက်နီးနီးဆိုတော့ အင်း ခံနိုင်ရည် ပြည့်ဝနေတဲ့ ကျွန်တော်တို. အတွက်တော့ အင်းသိ
option 1 ဖြစ်ရမယ်လို့မတွေးရဲပေမယ့် option2ဖြစ်မှာတော့ကြောက်လိုက်တာ (ဖြစ်တောင်ဖြစ်နေပြီ)..
မင်းအိမ်ဖြူ Minn Eain Phyu said...
နံပါတ်၁ ကိုတော့ အားလုံးမျှော်လင့်နေကြတာပေါ့ဗျာ
နံပါတ်၂ ကတော့ အခုလည်းနီးနီးဖြစ်နေတာဆိုတော့ အင်း သည်းခံခြင်းပါရမီ ပြည့်စုံလေသော ကျွန်တော်တို. အားလုံး ထူးပြီးလည်း ခံစားရတော့ မယ် ထင်ပါဘူးဗျာ
မမရေ... (၁ )ဖတ်ပြီး ပြုံးနေမိတာ (၂) ဖတ်ပြီး တုန်လှုပ်သွားတယ်...။
ဖြစ်နိုင်ချေကို စဉ်းစားတတ်တဲ့ မကြီးချိုသင်းရဲ့ ဖြစ်နိုင်ချေ စိတ်ကူးကိုပြောတာနော်
မ အနုစိတ်စဉ်းစားထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ပထမအပိုင်းကို မျှော်လင့်သူများအတွက်တော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကို ဖြစ်ဖို့ ဘယ်သူမပြု မိမိမှု...တဲ့လား။
မြားချက်ပြင်းပေမယ့် စလှမ်းမယ့်သူကိုပဲ အားလုံးကို မျှော်လင့်နေကြတော့... :(
(၁) ဖတ်ပြီး ကြည်နူးနေတာ (၂) ဖတ် လိုက်တာ ညှစ်သတ်လိုက်သလိုပါပဲ..း)
အခြေအနေအမှန်က ၁နဲ့၂ကြား၊ တ၀က်နဲ့ ၁ကြားမှာ ရှိမယ်ထင်တယ် အမ။ လက်ရှိကနေ ၁ရောက်ဖို့ နှစ်၂၀နဲ့မရဘူးလို့ ထင်တာပဲ။
တော်လှန်ရေး၏ နိဂုံးဟာ ဒီမိုကရေစီပါ. နောင် လာမယ့်
အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ နိဂုံးချုပ်ပြီးသားကို မျှော်လင့်နေပါတယ်.(ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးနေသော united stete of myanmar )
option 1 ကိုမြန်မြန်ဖြစ်စေခြင်ပြီ ဖြစ်အောင် လုပ်နေသူတွေကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပံ့ပိုးကြစို့
ဒီတခါComment ပေးဖို့ တော်တော်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်။
သေချာတာကတော့ လိပ်ပြာတစ်ကောင်တည်း တောင်ပံခတ်တာနဲ့ မုန်တိုင်းတွေ ဖြစ်မလားနိုင်လောက်ဖူးထင်တယ် အမ။ ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ ပထမအနာဂတ်အတွက်ရော၊ ဒုတိယအနာဂတ်အတွက်ရောပါ။
ဒီစာကို ကျွန်တော်ပြန်လာဖတ်ပြီး ပျော်ချင်ပါသေးတယ်။
ကင်ပေတိုင်း ပြတိုက်ဆိုပြီး ပြထားမှာ။ နိုင်ငံတကာက ခု သဲကုန်းဆရာတော် လှည့်လေ့လာသလို လေ့လာကြလိမ့်မယ်။
၂ကတော့ ခုဖြစ်နေတာပါ။ အဖိုးကြီးကို ဘာလို့ အဲ့တော့မှ ပေးသေတာလဲ။
မည်သူမပြူ မိမိမူ့ တဲ့။
ကြိုက်ကြိုက် အားလုံးကြိုက် မျိုးတင့်ဆွေကို အားလုံးကြိုက် အဲလေ နံပတ်၁ ကို အားလုံးကြိုက်။
ကျွန်တော်တို့ ရှေ့က မျိုးဆက်တွေ တာဝန်မကျေခဲ့သေးသမျှ ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဘဝမှာ အခုလို အာဏာရှင် စနစ်ဆိုးနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့...
ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာလဲ ဒီတာဝန်တွေကို ဟိုလူ့ ပုံချ... ဒီလူ့ အပြစ်တင်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကျတော့ ခေါင်းရှောင်နေကြဦးမယ်ဆိုရင် နောင်အနှစ်နှစ်ဆယ် မပြောနဲ့ ၄၀၊ ၅၀ နှစ် ၁၀၀ အထိလဲ လွတ်လပ်မှာ မဟုတ်ဘူး။
မချိုသင်းချပြလိုက်တဲ့ ဒုတိယ ဗားရှင်းက ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ပိုထိရောက်တယ်...
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်စိတ်ကူးလေးထဲမှာပဲ ယစ်မူးမနေဘဲနဲ့ နောင်တစ်နေ့ ရောက်လာမယ့် အနာဂတ်...
ကျွန်တော်တို့ မွေးလာမယ့် ရင်သွေးတွေရဲ့ အနာဂတ်ကို ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာ မလျှော်ဖွတ်ပေးရင် ဒီအညစ် ဒီအဆိုးတွေက ဘယ်တော့မှာများ အဆုံးသတ်တော့မှာလဲ...
လူဆိုတာ တစ်နေ့တော့ သေရမှာပဲ... သေတဲ့အခါ ဘာမှ ပါသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ မသေခင် ကိုယ်က ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်... အနည်းဆုံး ကိုယ်မွေးလာမယ့် သားသမီးတွေရဲ့ လူမှုဘဝ အနာဂတ်အတွက် ဘာလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလဲ...
ဒီမေးခွန်းကို လူတိုင်းကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးစေချင်တယ်...
option 1 ကို မျှော်လင့်မနေဘဲ အားလုံး ကိုယ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်က ကြိုးစားရင် နောင်လာမယ့် အနှစ် ၂၀ တော့ မဖြစ်နိုင်သေးပေမယ့် အနှစ် ၅၀ လောက်ဆို ရင်တော့ ဖြစ်လာမှာပါ။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအချိန်လောက်ဆို... ကမ္ဘာကြီးတခုလုံး option2များဖြစ်နေမလား..............
အစ်မရေ...ဒီလို ရေးလိုက်တော့ ... အရမ်းကိုလန့် သွားတယ်..အပိုင်း2ကိုရင်ဆိုင်ရမှာကိုပေါ့..။ အပိုင်း 1 အတိုင်းလေး..ပဲ ဖြစ်စေချင်တယ် အစ်မရယ်..။ ဖြစ်အာင် လုပ်ရမယ် အစ်မ ရယ်..။
ပြောထားပြီးသားပဲလေ အကောင်းဆုံးကို မျှော်လင့်ထားသလို အဆိုးဆုံးအတွက်လဲ ပြင်ဆင်ထားရမယ်လို့။ ဒါပေမယ့် အကောင်းဆုံးတွေပဲ ဖြစ်ချင်တာ သဘာသ၀ပဲမို့...... ဟင်းးးးးးးးးး
အမရဲ့ အရေးအသားတွေက ကောင်းလွန်းပါတယ်...option 1 ဖြစ်လာမယ့်ရက်ကို မျှော်လင့်နေပါတယ်..
Very nice Idea. Let's struggle for freedom of Myanmar.
Let's struggle for freedom of Myanmar.
နှစ်ဆယ် ၂ က ခုကတည်းကတိုင် ဖြစ်နေတာမို့..
နှစ်ဆယ် ၁ ကိုသာမျှော်လင့်မိပါကြောင်း...
သမီးကတော့ စိတ်ကူးတွေကို ပုံဖော်ရတာကြိုက်တယ်။
လုပ်ကြည့်တာပေါ့ မရလည်း အရင်းပဲ။ ဒီအတိုင်းနေလည်း သေမှာပဲ။ လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့ တောင်ပံခတ်သံဟာ မုန်တိုင်းဖြစ်မလာနိုင်ပေမဲ့။ လိပ်ပြာတစ်ကောင်ဟာ လူဆိုးရဲ့ နားစည်ကို ဒုက္ခပေးနိုင်ရင် လူဆိုးကို အနိုင်ရမှာပါ။ ကြွက်ကလေးမှာလည်း အစွမ်းအစရှိပါတယ်။
ညီစေနော် ဒို့ ရဲဘော်။
ို့ မြန်မာပြည်အလံတွေ မြေပေါ်ပုံနေပြီး ခွေးကို လူက ဘုရားထူးရမယ့် အဖြစ်မျိုးနဲ့ မကြုံပါရစေနဲ့ အစ်မရယ်..ငိ်ုချင်သွားတယ်..
လူတိုင်းမှာ တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိပါတယ်။
Phoe Pyae Lone said...
လူလိမ္မာ သား သမီးတွေက တော့ဦးနှောက် ရှိတယ်။ ပညာတတ် မိဘများကသွန်သင်ဆုံးမ
ထားတော့ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိတယ်။ ကဗျာဆရာ
ကြီး ရဲ့ရင်သွေးဆိုတော့ အနုပညာခံစားချက်
ရှိတယ်။ လူမိုက်ကြီးတွေကတော့ တိုင်းပြည် အုပ်ချုပ်နေတာ အနှစ်နှစ်ဆယ် ရှိပြီ။ သူ(လူမိုက်ကြီး)သေသွားလျှင် ဒယ်အိုးကို ချက်ချင်းမရောက်ဘူးခင်ဗျာ။ ခဏဆိုင်းပြီး ပြိတ္တာဘုံမှာထားဦးမှာ ပြီးတော့မှပို့မှာသူတို့
ကုန်သွယ်ရေးမှာထုတ်သွင်းလိုင်စင် စောင့်နေလို့ မရောက်သေးဘူးတဲ့။
(နှစ် နှစ်ဆယ် ၂ အတွက်အားဖြည့်ပါသည်။)
ဗားရှင်း ၁ ကို အမျှော်လင့်ဆုံးပဲ။
၂ ကတော့ အခုလည်း တ၀က်လောက်မှန်နေပြီ။
ဖအေတူသမီးလို့မှတ်ချက်ချလို့ ရသွားပြီ။
အမှန်တရားအတွက်၊ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက်
ကိုယ်ပိုင်တဲ့ ကလောင်နဲ့အလုပ်အကျွေးပြုခွင့်ရတာ
မချိုသင်းရယ် (၁)ဖတ်ပြီး ပြုံးနေတာ (၂)လည်းရောက်ရော ကျောချမ်းလိုက်တာ။ ကလောင်ကစွမ်းပါ့။ ကစွန်းရွက်ကြိုက်လွန်းလို့ ၁စီး ၁သောင်းတော့ မလုပ်ပါနဲ့။ ရန်ကုန်ပြန်မှ ကစွန်းရွက် အ၀စားရတာမို့ပါ။
ကြိုက်လို့ အစအဆုံးကူးပြီး ကိုလူထွေးဆီမှာ တင်ထားလိုက်တယ်...
အမမိုးချိုသင်းရဲ့  ပိုစ့်လေးကို အရမ်းလေးစားမိပါတယ် အရမ်းကြိုက်လို့ ကူးယူပြီး တင်ဖို့ လာတောင်းတာပါ ခွင့်ပြုမှု မရခင် အမြန်တင်လိုက်ပါမယ် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရန်သူ့လူတွေကို အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပြချင်လို့ပါ အမြန်ဆုံးပျံ့ နှံချင်လို့ပါ
ချိုသင်းရေ… လမ်း၂ခုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ချပြသွားတတ်လိုက်တာ…
ဘယ်သူမပြုမိမိမှုတဲ့... ထို့ ကြောင့် မိုးချိုသင်းဟုခေါ်ပါသည်…
၁ ကိုလို ချင် မြန်မြန်ကြံ
၂ ကိုလို ချင် ငြိမ်သာခံ
အချိန်မရလို့ Comment မရေးခဲ့ရတာ...
ကိုယ်ကတော့ လူသားပီပီ ကောင်းတာလေးကိုပဲ နှစ်သက်မိတာပေါ့...
သို့သော် တော်တော်တော့ ကြိုးစားကြရလိမ့်အုံးမယ် ထင်တယ်နော်...။
ဖြစ်စေချင်တာတွေ . ဖြစ်သင့်တာတွေ . ဖြစ်နေတာတွေ ..ဖြစ်လာမှာတွေ ..
ကဲ ..ကဲ ..ပြောနေတာ ကြာတယ် ။
ကိုလူထွင်းကြီး နဲ့ မြူးတို့ နောက်လိုက်
ခုခေတ်က ကော်ပီခေတ်လေ ။
ခွင့်ပြုချက်လေးတခုတော့ တောင်းလိုက်ပါတယ် ။
ပြန်လည် ဖေါ်ပြခွင့် ပြုပါလို့ ။
ကိုလူထွေးဆီရောက်လာတဲ့ ကော်မင့်တစ်ခုကို မူရင်းစာရေးသူကို ပြန်လည် မျှဝေပါတယ်ခင်ဗျာ...
ကိုထွေးေ၇ကျေးဇူးပါလို့ပြောပါရစေ ကျနော်လေဒီပို့ စ လေးကို မမိုးချိုသင်းရေးထဲကမန့့်ချင်နေတာမန့် လို့ မ၇တော့့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ခုကိုလူထွေးတင်မှဘဲမန့် ရတော့ တယ်ဒီလိုဗျာကျနော့ မန့် လေးကမျော်လင့် ခြင်းများစွာနဲ့ဘားရှင်းတစ်ကို ကျ့ နော်တို့ မျှဝေခံစားချင်ပါတယ်ရိုးရှင်းလွန်းတဲဆန္ဒတခုပါဒီဆန္ဒသည်မှန်ကန်ပါ၏ထိုမှန်သောသစ္စာကြောင်ကျနော်တိ့မခံစားရ သည့်တိုင့်ကျနော်တိ့သားစဉ်မြေးဆက်ခံစားရပါစေသားမူရင်းစာရေးသူအပါင်အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားသော သုဒြေ္န
ထိုမှန်ကန်သောသစ္စာကြောင့် ကျနော်တို့ မခံစားရသည့် တိုင်ကျနော်တို့ သားစဉ်မြေးဆက်ခံစားရပါစေသား မူရင်းစာရေးသူအပါဝင်အားလုံးကိုခင်မင်လေးစားသော သုဒြေ္န
ကော့မန့် တွေ လာဖတ်တာ။
မကြီးရဲ့ ပိုစ့်ကို ကျနော်အိမ်မှာ ပြန်တင်ချင်တယ်
ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် တနည်းနည်းနဲ့ အကြောင်းပြန်စေချင်ပါတယ်ဗျာ...
ကောမန့်၅၀ ကျော်သွားတဲ့ "အနှစ်နှစ်ဆယ်" မို့စာဖတ်သူတွေ ဘာလိုချင်နေလဲဆိုတာ သိအောင် လက်တို့ လိုက်တယ်နော်။ ရင်ထဲရှိတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးဖို့ အချိန်တန်ပြီနော်။ KM
ကျွန်တော်လည်း အမပို့ စ် ကို တင်ချင်ပါတယ်
အမ ချပြပေးလိုက်သလို ပါပဲ ။
အမနာမည်နဲ့ ပဲ ပြန်လည်ဖော်ပြပါမယ်
နောင် အနှစ်၂၀ ပို့ စ်ကိုဖတ်လိုက်ရတာ...
နတ်ပြည်နဲ့ငရဲပြည် နံရံ ၂ခုကြားရောက်သွားသလိုဘဲဗျာ...
ချပြတဲ့ စိတ်ကူးအမြင်လေးကတော့ ကောင်းပါတယ်...။
ကျနော်အပါအ၀င် မြန်မာပြည်သားတွေ ကိုယ်တိုင်ကပြကြမယ့်....
if we all keep on doing as we did so far, the option2will come true for dead sure. it is already almost there.
အမရေ တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ စိတ်ကူးပါ။
၁) အနေနဲ့ ဘယ်သူတက်တက်ပါ ပြည်သူတွေအတွက်စဉ်းစားပေးရင်တော်ပါပြီ။
၂) ကတော့ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကတော့ ရာဇဝင်တွင်းဦမှာပေါ့ဗျာ။ ဘယ်ရောက်ရောက် မြန်မာဆိုတာ ခေါင်းတောင် မဖေါ်ရဲအောင်ကိုဖြစ်အုံးမှာပါ။
၁ လေး အတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဗျာ။
အုတ်တံတိုင်းခက်လိုက်တာပါ ထည့်ရေးလိုက်လေဗျာ ။
မေလေး စီဘောက်မတွေ့လို့ တွေ့ တဲ့ထဲအော်သွားပါတယ် ...မမမေလေးဆီ ကော့မန့်လာရေးတာ မေလေး အရမ်းကို ပျော်သွားတာ ..တကယ်ပြောတာ..မေလေး ဘလော့ စဖတ်ထဲက လေးစား၇တဲ့ ထဲမှာ မမလဲ ရှေ့ဆုံးကပါတယ် သိလား..မမ မယုံရင် မေလေးအရင်ကရေးထားတဲ့..“မြူး ဇော် ပါးလုံးနဲ့ ဘလော့ ကာအကို အမများအားလုံးသိုပ ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း” ကို လာဖတ်ကြည့်ပါနော်..
နှစ်ဆယ်(၁) အတိုင်းဖြစ်ပါစေ အမရေ။
တား ကျောက်တယ် ဂျ။
မချိုသင်းဘလော့ကို ပြန်လာဖတ်တာ ဒါနဲ့ဆို အစအဆုံး ၃ ကြိမ်ရှိပြီ ။ ဒီပိုစ့်လေးကဟာလေးတွေက နှစ်ခုရောပြီးဖြစ်နေတယ် ။
တစ်သောင်းတန်တွေသုံးနေရသလို ၀ိုင်ဖိုင်တွေလည်းရနေပြီ ။